सात कम्पनीको धमाधम ऋणपत्र आउँदै, हेर्नुहोस् कुनको कति छ ? – Investing Nepal
सात कम्पनीको धमाधम ऋणपत्र आउँदै, हेर्नुहोस् कुनको कति छ ?
By: Nepse Direct Jan 12, 2020
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्रको बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि त्यसको सार्थक परिणाम देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ वटा बैंकले दीर्घकालीन लगानी साधन ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् । ऋणपत्र जारी गर्न यतिबेला नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ७ वटा रहेका छन् । न्यूनतम १० दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने भएकाले दीर्घकालीन ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७५–७६ को वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोतसाहन गर्ने नीति लिएको थियो । बैंकले त्यसरी संकलित साधनलाई कर्जा–कुल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको थियो ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिमा समेत सोही व्यवस्थालाई निरन्तर कायम राखिएको छ । आव २०७५–७६ मा मात्रै १४ वाणिज्य बैंकले ४३ अर्ब ९८ करोड बराबरको ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका थिए ।
ऋणपत्रमा हुने फाइदा र आकर्षणका कारण लगानीकर्ताले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्रमा बढी चासो राखेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म मात्रै ५ वटा बैंकले ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमा सिद्धार्थ बैंकको सात वर्षे १०.२५ प्रतिशत एसबीएल डिबेञ्चर २०८३ ले गत साउन १४ गते स्वीकृति पाएको थियो । सो बैंकले १ हजार मूल्य बराबरका २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले कुल २ अर्ब ५० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्री गरेको हो ।
यस्तै लक्ष्मी बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर २०८६ बिक्रीका लागि गत भदौ १७ गते अनुमति लिएको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार बराबरका कूल २० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले २ अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि १ अर्ब बराबरका १० लाख कित्ता, सनराइज बैंकले ३० लाख कित्ताका लागि कुल ३ अर्ब र कुमारी बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो । अनमुति लिएकामध्ये केहीले ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै रहेका छन् । कुमारीको भने बिक्री खुला भइरहेको छ ।
यस्तै, बोर्डका अनुसार कुल ८ अर्ब ९५ करोड बराबरका ऋणपत्र स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । ऋणपत्र बिक्री गर्ने संस्थामा बैंकका अलावा फाइनान्स कम्पनीसमेत छन् । ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति माग्नेमा गुडविल फाइनान्स रहेको छ । ७ वर्षे अवधिका लागि १२ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले कुल २ लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ । यसैगरी, आइसीएफसी फाइनान्सले पनि ऋणपत्र ल्याउँदैछ ।
यस्तै, एभरेष्ट बैंकले ७ वर्षे अवधिका लागि १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । ऋणपत्र बिक्रीको तयारीमा कृषि विकास बैंक र सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल पनि रहेका छन् । कृषि विकास बैंकले २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न खोजेको छ । वार्षिक १०.३५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको हो ।
यस्तै वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सिटिजन्स बैंकले पनि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । यसैगरी, नेपाल एसबीआई बैंकले २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री तयारी थालेको छ । १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी बिक्री गर्न लागिएको यस ऋणपत्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको छ ।
बोर्डमा आवेदन दिएको अर्को बैंक हो नबिल बैंक । सो बैंकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी कुल २ अर्बको ऋणपत्र बिक्री अनुमति मागेको छ । ती सबै ऋणपत्र अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । निश्चित ब्याज तोकिएको अवधिभर पाइने भएकाले पनि ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि, यसअघि जारी भएका ऋणपत्रहरु सजिलैसँग बिक्री हुन भनेको सकेको थिएन ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हाल ८ वटा ऋणपत्रको कारोबार भइरहेको छ । त्यसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल आइएमई डिबेञ्चर, एनआइसी एसिया डिबेञ्चरका तीन योजना, सिद्धार्थ, बैंक अफ काठमाडौं, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंकको ऋणपत्र कारोबारमा छन् । यस्तै बोर्डमा कुल १४ कम्पनीका ४ अर्ब ४० करोड ६५ लाख बराबरका साधारण सेयर (आइपीओ) पनि बिक्रीका लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसमा अधिकाशं जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् ।
LBL , LBLPO , PRVU , PRVUPO , EBL , EBLCP , ADBL , SBI , SBIPO , NABIL , NABILP